Nei Martin Gavenda? - Kuverengera kuhumambo
Kutevera Turzovka (1958-1962) uye Litmanova (1990-1995), musha weDechtice ndiyo yechitatu nzvimbo yemazuva ano yekuonekwa muSlovakia, uko zviitiko zvisina kutsanangurwa nesainzi zvakatanga muna Zvita 4, 1994. Vari munzira kuenda kumba kubva kuSvondo Misa, vana vana vaive kutaura nezvekuenda kunonamata nemuchinjikwa wemuno muDobra Voda apo mumwe wavo akaona zuva richitenderera uye richichinja ruvara. Vachiona kuti ichi chingave chiratidzo, vana vakatanga kunamata Rosary. Martin Gavenda - uyo aizove muoni mukuru wemaporofita - akaona mwenje muchena uye mukadzi wechikadzi uyo akati aida kumushandisa pakuronga kwaMwari. Pakutaridzika kwemukadzi kunotevera, vana vakasasa chimiro chisinganzwisisike nemvura yakaropafadzwa, vachifunga kuti ingave dhimoni, asi mukadzi haana kunyangarika. Aya maitiro akaenderera muDobra Voda, zvakare muDechtice, uko vamwe vana zvakare vakatanga kugamuchira mameseji. Musi waAugust 15, 1995, mukadzi uyu akazvizivisa saMaria, Mambokadzi weRubatsiro.
Misoro mikuru yemeseji kubva kuDechtice, inoenderera nanhasi, zvakangofanana neiya yakagamuchirwa kune mamwe masayiti anotendeseka mumakumi emakore apfuura. Vanosimbisa kuyedza kwaSatani kwekuparadza Chechi nepasi rose nemushonga wakapihwa neDenga: masakaramende, Rosary, kutsanya nekuripira mhosva dzakaitirwa Mwoyo yaJesu naMaria, hutiziro ne "areka" kune vakatendeka mumatambudziko edu nguva.
Mamessage kubva kuna Martin Gavenda
Martin - Kuparadzwa Kukuru kwave Kutanga
Ndiyo hondo yekupedzisira yekutenda kwechokwadi kweKaturike.
Martin - Mbiri Inokuvadza Mwoyo
... nekuti hakuna kukwana kutendeuka.
Martin - Iwo Maketani eKuranda
Tizira kudziviriro yangu nekuwedzera kuvimba.
Martin - Mweya Mutsvene Unofukidza Mhuri
Tizira kudziviriro yangu ine simba.
← Sei Muranda waMwari Luisa Piccarreta?
Nei Gisella Cardia? →